I-PAUNOV HOUSE PAUNOV HOUSE
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguGeorgi
Indlu yasePaunov ikwindawo enzima yeentaba zeRhodope. Le ndawo inomoya ococekileyo kwiiBalkans naseYurophu. Inqaku lomdla: Bekovi skali Chervenata skala, Chapel Saint Ilia kunye nezinye ezininzi. Abanini abanobuhlobo kakhulu kwaye indlu icocekile kakhulu icocekile ngomoya omangalisayo !!!
IPACOCK HOUSE ikwilali yaseRavnogor. Indlu yindlu enkulu ejikelezwe ngamadonga aphakamileyo kwaye izimele ngokupheleleyo. I-villa yonke (kungekhona ngamagumbi) ihlelwe kakuhle kakhulu kwisitayile sentaba sanamhlanje esidityaniswe ne-motifs yanamhlanje. Inamagumbi okulala ama-4, amagumbi okuhlambela ayi-3 kunye nezindlu zangasese, ikhitshi langoku elixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo kwikhaya. Igumbi lokuhlala elipholileyo elinendawo yomlilo kunye nazo zonke izinto eziluncedo zokuphumla. Onke amagumbi, kubandakanywa nebarbecue, axhotyiswe ngoomabonakude bamehlo. Le ndlu ineegadi ezi-4, ibarbecue enkulu yabantu abayi-15 enokusetyenziswa kude kube sekupheleni kwekwindla. Iikhilomitha ezi-4 kuphela ukusuka endlwini kukho amatye e-Bekovi, indawo eya kukukhupha umphefumlo kwaye iya kuhlala kwiinkumbulo zakho ngonaphakade! Xa usityelela, ngokuqinisekileyo, siya kukwazisa ngayo yonke imibandela ephathelele iholide yakho. Banobubele kakhulu nababuk' iindwendwe. Sinxibelelana ngesiBulgaria, isiNgesi, isiRashiya nesiPolish. Ngolwazi oluthe vetshe ungalibazisi ukusitsalela umnxeba. Kuya kuba luvuyo lwethu ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
Joro kunye Aga
Umbuki zindwendwe ngu- Georgi
Ndiyafumaneka kwiindwendwe zam ngalo lonke ixesha ukuba kuyimfuneko. Kwanele ukuba uqhagamshelane nam ngefowuni ebonelelweyo kwaye ifumaneka 24/7. Umgaqo-nkqubo wethu xa indlu ihleli kukunika ukuzimela okupheleleyo kwiindwendwe zethu kwaye kuphela xa kuyimfuneko ukuqhagamshelana nathi.
Ndiyafumaneka kwiindwendwe zam ngalo lonke ixesha ukuba kuyimfuneko. Kwanele ukuba uqhagamshelane nam ngefowuni ebonelelweyo kwaye ifumaneka 24/7. Umgaqo-nkqubo wethu xa indlu ihle…